Igama lesiqhelo: uycube
Igama lebrand: I-Bonine, uKhenketho oluNcedo
Udidi lweziyobisi: Izinto ezichasene ne-anticholinergic antiemetics
I-Meclizine isetyenziselwa ukunyanga okanye ukuthintela isicaphucaphu, ukugabha kunye nesiyezi esibangelwa kukuhamba.
I-Meclizine ikwasetyenziselwa ukunyanga iimpawu ze-vertigo (ukuziva unesiyezi okanye ukujikeleza) okubangelwa zizifo ezichaphazela indlebe yangaphakathi.
I-Meclizine inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Loluphi olona lwazi lubalulekileyo ekufuneka ndilwazi malunga ne-meclizine?
Landela umkhombandlela kwileyibhile yeyeza kunye nephakheji. Xelela umboneleli wakho ngamnye wezempilo malunga nazo zonke iimeko zakho zonyango, ii-aleji, nawo onke amayeza owasebenzisayo.
Yintoni endifanele ndixoxe ngayo nomboneleli wam wezempilo ngaphambi kokuba ndithathe i-meclizine?
Akufanele usebenzise i-meclizine ukuba uyaliwa.
I-Meclizine akufuneki inikwe umntwana ongaphantsi kweminyaka eyi-12.
i-flexeril dose yabantu abadala
iprotrate eyandisiweyo; okanye
Ndingayithatha njani i-meclizine?
Kufuneka uyihlafune ipilisi ehlafunwayo phambi kokuyiginya.
Ukuthintela ukugula kokuhamba, thatha i-meclizine malunga neyure e-1 ngaphambi kokuhamba okanye ulindele ukugula kwesindululo. Ungathatha i-meclizine kube kanye kwiiyure ezingama-24 xa useluhambeni, ukuqhubeka nokukhusela ukugula kwesindululo.
Ukunyanga i-vertigo, unokufuna ukuthatha i-meclizine amaxesha ngamaxesha ngemini. Landela imiyalelo kagqirha wakho.
Eli yeza linokuchaphazela iziphumo zovavanyo lolusu. Xelela nawuphi na ugqirha okunyangayo ukuba usebenzisa i-meclizine.
Gcina i-meclizine kubushushu begumbi kude nobushushu, ubushushu kunye nokukhanya.
Kuba i-meclizine ngamanye amaxesha ithathwa kuphela xa ifuneka, ungangabikho kwishedyuli yokulinganisa. Tsiba nayiphi na idosi ephosiweyo ukuba kusondele ixesha ledosi elandelayo. Sukusebenzisa amanani amabini ngexesha elinye.
Yintoni endifanele ndiyiphephe ngelixa ndithatha i-meclizine?
Ukusela utywala kunokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga ze-meclizine.
Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho ze-meclizine?
Funa uncedo lwengxamiseko ukuba unayo iimpawu negazi lakho Imingxuma ubunzima bokuphefumla; ukudumba kobuso, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
waphosa phezulu; okanye
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-meclizine?
Ukusebenzisa i-meclizine kunye nezinye iziyobisi ezenza ukuba wozele kungoyenza mandundu le mpembelelo. Buza ugqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa iyeza le-opioid, ipilisi yokulala, isithambisi semisipha, okanye iyeza lokukhathazeka okanye ukuxhuzula.
Amanye amachiza anokuchaphazela i-meclizine, kubandakanya amayeza kagqirha kunye neeleta, iivithamini kunye neemveliso zamayeza. Xelela ugqirha wakho ngawo onke amayeza owasebenzisayo, kunye nawaphi na amayeza owaqalisayo okanye owayekayo ukuwasebenzisa.
Usokhemesti wakho unokubonelela ngolwazi oluthe kratya malunga ne-meclizine.
Yonke imizamo yenziwe ukuba kuqinisekiswe ukuba ulwazi olunikezwe yiCerner Multum, Inc. ('iMultum') ichanekile, yangoku, kwaye iphelele, kodwa akukho waranti yenziweyo. Ulwazi lweziyobisi olubandakanyiwe apha lunokuba neengcebiso ezintsha. Ulwazi olulungiselelwe iMultum lwenzelwe abathengi kunye nolondolozo lwempilo e-United States of America (i-USA) kwaye ke iMultum ayiqinisekisi ukuba ukusetyenziswa ngaphandle kwe-USA kufanelekile, ngaphandle kokuba kuchazwe ngokuthe ngqo. Ulwazi lweMultum ngamachiza aluniki ziyobisi, okanye luchaze isigulana okanye lucebise unyango. Ulwazi lweziyobisi oluninzi lusebenza njengomthombo wolwazi oluyilelwe ukunceda abaqeqeshi bezempilo abanelayisensi kukhathalelo lwezigulana zabo kunye / okanye ukukhonza umthengi ofumana le nkonzo njengesongezelelo, hayi njengendawo yalo, ulwazi, amava, ulwazi kunye nembono yengcali yezempilo. Ukungabikho kwesi silumkiso sokudityaniswa kweziyobisi okanye iziyobisi akufuneki, nangayiphi na indlela, kuthathwe njengokwenza indibaniselwano yeziyobisi ikhuseleke, isebenze, okanye ilungele nasiphi na isigulana. IMultum ayinaxanduva lwayo nayiphi na inkalo yonyango olufumanayo ngoncedo lolwazi oluvela kwiMultum. Olu lwazi lubandakanyiwe apha alwenziwanga ngenjongo yokugubungela yonke into enokusetyenziswa, imiyalelo, izilumkiso, izilumkiso, ukusebenzisana namanye amachiza, ukungadibani nezinto ezithile, okanye iziphumo ebezingalindelekanga. Ukuba unemibuzo malunga neziyobisi ozithathayo, buza ugqirha wakho, umongikazi, okanye usokhemisti.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 7.01.
ngaphezulu kweepilisi zoxinzelelo
I-promethazine esemgangathweni ene-codeine ethengiswayo
Uyenza njani idayi minecraft